कसरी आउँछ डण्डिफोर ? डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित ? जानकारीको लागी शेयर गरौ | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी आउँछ डण्डिफोर ? डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित ? जानकारीको लागी शेयर गरौ
प्राय मानिसलाई किशोर अवस्थामा डण्डिफोर आउने गर्दछ । किशोरबाट युवा अवस्था प्रवेश गर्ने बेलामा आउने डण्डिफोरले धेरैलाई असहज बनाउने गर्दछ ।हर्मोनको गडबडीका कारण आउँने डण्डिफोर ग्रन्थीमा असन्तुलन भएर आउने गर्दछ । तर डण्डिफोर आउँदा यसले सुन्दरतामा केही प्रभाव पारे पनि स्वास्थ्यमा भने हानी गर्दैन । यदि डण्डिफोरलाई कालो हुने अवस्थासम्म चलाइएन वा निचोरिएन भने पछि खिल बस्ने हुन्छ । जसलाई सजिलै निकाल्न सकिन्छ । ग्रन्थीको असन्तुलन बाहेक डण्डिफोर आउनुको मुख्य कारण भनेको अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान, तनाव तथा अनिद्रा हो । केही महिलालाई महिनावारी हुनुअघि पनि डन्डिफोरले सताउने गर्दछ ।
युवावस्थामा अधिकांशलाई सताउने छालाको साझा दोष हो( डण्डिफोर! विश्वभरीका ८०५ भन्दा बढि युवायुवतीहरूले डण्डिफोरको पीडा सहने गर्छन्। हुन त प्रौढ अवस्थामा पनि थुप्रै कारणले गर्दा डण्डिफोर आउने गर्छ, जस्तैस एण्ड्रोजेन नामक हरमोनमा असन्तुलन । हाल डण्डिफोरको बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भैरहेका छन्, तरपनि यसको ठेट कारण भने अझसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर डण्डिफोर आउनु पनि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीकै कारण हो ।
हाम्रो छालामा हुने सूक्ष्म प्वालहरू जब बाहिरको धुलो र ब्याक्टेरियाले टाल्लिन्छ, तब त्यस प्वालमा हुने तेल निकाल्ने सबासियस ग्रन्थि पनि टाल्लिन जान्छ ।जसको कारण ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गराउन सुरु गर्छ । यहि ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरभित्र पस्न नपाओस् भनेर सेता रक्तकोषहरूले छेकेर बस्ने गर्दछन् र ती ब्याक्टेरियाहरूलाई बाहिर निकाल्न खोज्छन् । यसै कारण नै कुनै(कुनै डण्डिफोरको टुप्पामा कालो खिल देखिन्छ ।
डण्डिफोर भनेको छालामुनि भएको एउटा सानो झोलाजस्तै हो, जसमा चिल्लो पदार्थ, ब्याक्टेरिया अनि जलन गराउने तत्व रहेको हुन्छ । यसलाई निचार्दा झोलाभित्र भएका सबै तत्वहरू छाला बाहिर निस्कन्छन् र बाहिरको छालामा सङ्क्रमण पनि हुन सक्छ । यसले झन् नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । साथै, डण्डिफोर निचारिसकेपछि त्यसले झन् बढि जलन गराउन सक्छ र छालामा कालो दाग पनि बस्न सक्छ । र यो दाग डण्डिफोर जस्तो होइन, यो त सँधेको लागि पनि बस्न सक्छ । फेरि डण्डिफोर निचार्दा नङमा भएको ब्याक्टेरिया र अन्य फोहोरको कारण अझ बढि सङ्क्रमण हुन जान्छ । यदि तपाईँले डण्डिफोर निचार्ने इच्छालाई दबाएर राख्न सक्नुभयो भने त्यो १ हप्ताभित्र आफै हराएर जान्छ, दाग नै नराखीकन। कुनै डण्डिफोर पाकिसकेपछि आफै फुटेर जान्छ ।
डण्डिफोर आउनुमा धेरै कुराको भूमीका हुन्छ । अनुहारमा लगाउने क्रिम, साबुन तथा फेसवासले पनि तपाईँको अनुहारको छालामा डण्डिफोर निम्त्याइरहेको हुन सक्छ । साथै बढि चिल्लो खाद्यपदार्थको सेवनले समेत कसै(कसैको छालालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आफूलाई के(कुराले डण्डिफोर ल्याउँछ विचार गर्नुपर्छ र त्यसबाट बच्नुपर्दछ। त्यसलगायत डण्डिफोरबाट बच्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छौ ।
मेथी दानामा धेरै प्रकारका पोषक तत्व हुने भएकाले यस्को सागको तरकारी खानाले या दानाको सेवनले शरीरको रगत शुद्ध हुने र एनीमिया रोक्नमा सहायक हुन्छ। मेथीदानामा रहने गुणका कारण मनिसको स्वास्थ्यको लागि यो अमृत समान रहेको छ। मेथीमा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाईड्रेट, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, मैंगनीज, फोलिक एसिड, और फाइबर फास्फोरस तथा फलाम, तामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
यस्ले भोक जगाउँदछ। मेथीदानालाई अनेकन औषधीय प्रयोग गर्न सकिन्छमेथीको सेवनबाट वायु (गैस, कफ (बलगम) तथार ज्वर (बुखार) निर्मुल हुन्छ। वात रोग (जोर्नीमा दुख्ने, मा मेथीको पाउडरलाई मट्ठा(महिको साथमा पिउँनाले फाइदा हुन्छ। विहानै मेथी दानाको धुलो एक चम्मचको मात्रामा पानीको साथमा सेवन गर्नाले घुँडा दुख्ने समस्या रहन्न। खासगरी बुढापामा घुँडा दुख्ने समस्या रहन्न । मेथीको रस निकालेर विहान वेलुका पिउँनाले मधुमेह ठिक हुन्छ । कालो अङ्गुरसँग मेथीको रस समान मात्रामा लिनाले बवासीर ग्रस्त रोगी ठिक हुन्छ।मेथीमा फलाम तत्व रहने भएकाले जण्डिसका विरामीलाई यो फाइदाजनक हुन्छ । मेथीको तरकारीमा अदुवा गरम ससला हालेर सेवन गरेमा निम्न रक्तचाप भएकोमा फाइदा पुग्दछ ।
मेथीको तरकारी खानाले रगतमा शुद्धता आउँछ। मेथी दानामा मुटु स्वस्थ्य राख्ने पाचन शक्ति बढाउँने र कामवासना बढाउँने क्षमता रहेको हुन्छ । मेथीमा हुने पाचक एंजाइमले भोक बढाउँदछ । मेथीले ग्यास, कफ तथा ज्वरो नास गर्दछ । पेटमा वायु,पेटमा जुका चुर्ना, पेट दुख्ने, कमर दुख्ने तथा अन्य प्रकारका शारीरिक पीडा निर्मुल पार्दछ । मेथीको सेवनबाट स्त्री जातिमा हुने कमजोरी हटाएर शरीरमा शक्ति प्रदान गर्दछ । बच्चा जन्मे (प्रसूति) पछी गर्भाशयमा कुनै कमी भएमा वा गर्भासय ठिकसँग संकुचन नभएमा स्तनमा पीडा भएमा वा अन्य कुनै प्रकारका दुखाइमा लाभप्रद हुन्छ । यस्को सेवनबाट बन्द भएको मासिक धर्म फेरी सुचारु हुन थाल्दछ । स्तनमा दुधको मात्रा बढ्दछ । सन्धिवात अर्थात जोर्नीको दुखाई भएमा मेथीको साथमा गुड आँटा मिलाएर लड्डूको सेवन गर्ने गरिन्छ ।
मेथीमा क्यान्सर रोधक तत्व पाइन्छ। यस्को उपयोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तथा पेट संबंधी समस्या मा फाइदाजनक हुन्छ। मेथी मुटुकालागि विशेष लाभकारी तथा बलवर्धक हुन्छ । मेथीले रगतको कमी भएमा लाभकारी हुन्छ ।मेथीको काढा तथा चुर्णको सेवनबाट स्नायु रोग, बहु(मूत्र ,पथरी,टांसिल्स,रक्त(चाप तथा मानसिक तनाव तथा गर्भ(निरोधकको रुपमा लाभप्रद हुन्छ। मेथी ( दाना ) लाई सागको रुपमा दैनिक सेवन गर्न सकिन्छ । मेथी दानाको चुर्ण तीन ग्राम दहीमा मिलाएर खानाले आंव को बिमारीमा लाभ हुने र यस्को अतिरिक्त यस्ले पिसाब अत्यधिक आउँन रोकिन्छ ।
उमेर बढेकोमा यसबाट हुने कमजोरी हटाउँने तथा महिलाको सौन्दर्यमा निखार ल्याउँन मदत गर्दछ । आँखाको तल कालोपन मेटाउँनको लागि मेथीलाई पिंधेर पेष्ट बनाएर लगाएमा कालोपन रहन्न । मेथी दाना रातभर पानीमा भिजाएर विहान यस्लाई पिंधेर यस्को पेष्ट कपालमा लगाउँनाले कपाल झर्ने समस्या रहन्न तथा कपाल लामो हुने र सुन्दर देखिने गर्दछ । मेथी दाना पिंधेर यस्को लेप अनुहारमा लगाउँनाले अनुहारमा भएका दाग धब्बा हट्ने तथा अनुहार कान्तिमय हुन्छ । ताजा मेथीको पातलाई पिंधेर अनुहारमा लगाउँनाले अनुहारमा रहेका डण्डिफोर अनुहारको रुखापन तथा झुर्रियां चाउरी परेको निर्मुल हुन्छ । उमेर बढेको प्रकृया कम गर्न तथा महिलाको सौन्दर्य निखार्न तथा कपालमा भएको चाया हटाउँन मेथीको पेष्ट बनाएर लगाउँने र आधा घण्टामा सफा गर्नाले फाइदा जनक हुन्छ ।
मेथीको सेवनले एसीडिटी, अपच, अरुचि, गैस, दस्त, पेट दुखाई, बदहजमी, कब्जियत, पाचन(तंत्र को गडबडी, खोकी, सूजन, बादी, बवासीर, पेटको चुर्ना जुका आदि निर्मुल गर्ने तथा पिसाब सुचारु ढंगले लाग्ने गर्दछ । मेथी बवासीर ग्रस्त रोगीको लागि फाइदा जनक हुन्छ । पेटको छाला, आँतको सफाईको लागि दुई चम्मच मेथी एक कप पानीमा उमालेर मेथीको काढा बनाएर पिउँनाले लाभप्रद हुन्छ । मुखको छाल (खटिरा) ठिक गर्नको लागि मेथीको पातको अर्क तथा मेथीलाई पानीमा उमालेर चिसो भएको पानीले मुखको कुल्ला गरेमा फाइदा हुन्छ । कान बगेमा मेथीलाई दुधमा पिंधेर छानी हल्का तातो पारेर कानमा हालेमा कानबाट बग्न बन्द हुन्छ ।
पित्त दोषमा उमालेरको हरियो मेथीको पातलाई शुद्ध घिउमा तारेर खानाले फाइदा हुन्छ । मेथी पाउडरको सेवन दुधको साथमा गर्नाले मधुमेह ठिक हुन्छ । यस्मा रगत र पिसाबमा ग्लुकोजको मात्रा कम गर्ने विशेष गुण रहने भएकाले डायबिटिजमा विशेष गुणकारी हुन्छ । मेथीको काढा कानको दुखाई, सर्दी, मिर्गी, लकवा तथा फालिज इत्यादि रोगमा लाभप्रद हुन्छ । नपुंसकता, कमजोरी, गठिया (जोर्नी दुखेको), मधुमेह, बाल रोग, कब्जियत, अनिद्रा, मोटापा, रक्तातिसार तथा जलन आदि रोगमा मेथीको सेवन लाभप्रद र हितकारी हुन्छ ।